Sida loo jar VOB faylasha iyo Top 10 Best jaraya VOB Free
. MP3 download app t
"Waxaan kaliya u sarifay file a vob (2.3 GB) oo isticmaalaya DVD u Khushuucsan. Waxaan doonayaa in aan kala tagno vob kor u galay clips oo kala duwan (waxa ku jira videos music kala duwan). Kaliya waxaan isku dayay isticmaalaya mpeg video saaxir .. i soo xulay qaybta ka dibna dhoofiyo DVD mpeg .. waxa ay qaadataa oo ku saabsan 15minutes in la sameeyo 3 daqiiqo clip ah. Ma jiraa hab fudud oo taas loo samayn? "
Sida nin ee kor ku xusan, waxaa laga yaabaa in aad wax badan oo files VOB badaley ka DVDs music aad. Oo weliba, weeyna aad raadinayso hab fudud si ay u dhinto song kasta file hal. Xaaladdan oo kale, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) si ay u dhinto files VOB dhowr qaybaha oo si fudud oo dhaqso u dhoofiyaan clip kasta file cusub.
Marka la barbar dhigo qalabka kale video tafatirka, Wondershare magaabay VOB badbaadiyay waqti dheeraad ah oo aad u. Marka laga reebo jarida files VOB in dhererka kasta oo si dhab ah, waxa aad ku siinaysaa awood u leh inay dhoofin oo dhan clips VOB doonayo galay files kala duwan ee hal go, fududaynta shaqadaada si weyn.
Qayb First, waxaan idin tusayaa sida loo gooyay files VOB in version daaqadaha ee magaabay tallaabo VOB video ah talaabo doonaa.
Tallaabo 1: Ku dar files VOB in magaabay VOB this
Guji ka button inay ku shuban files VOB ka kombiyuutarka in this video VOB magaabay. Isla markiiba, aad ka ogaan doonto dhiganta baararka file VOB ayaa lagu daray in ay leeg- ee barnaamijkan.
Talaabada 2: VOB googoo clips
Midig u guji birta ku file VOB aad rabto in aad la gooyaa, ka dibna dooro "Edit" doorasho. In ka dhisayaa-up "jar" furmo suuqa, waxaa jira laba sliders labada dhinac ee bar horumarka video ah. Dhanka kale jiidi oo hoos u labada sliders u deji waqtiga iyo bilowgii iyo soo afjaridda ah, ka dibna riix "maqas" icon Macdan video clip ee la doortay.
Marka aad jaray VOB sida aad rabto, riix "OK" si loo xaqiijiyo goobaha kuwaas. Isla markiiba, aad arki doonaa video clip ee la doortay ayaa sidoo kale ku qoran in ay leeg- ee app this.
Talaabada 3: dhoofiyo oo dhan clips VOB
Riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad, ka dibna dooran "VOB" qaab ee "Qaabka" ayuu> "Video" category. Ugu dambeyntii, riix "Beddelaan" button on geeska hoose ee midigta ah interface ay u bilaabaan dhoofinta dhammaan faylasha VOB. Markii diinta lagu sameeyo, riix "Folder Open", waxaad ka heli doontaa VOB clip kasta waxaa lagu keydiyaa file hal.
Qaybta labaad, hogaanka toban jaraya VOB ugu wanaagsan ee la qaababka ugu muhiimsan.
DVD magaabay oo lagu daray
Magaabay VOB Tani waa fursad la awoodi karo in damaanad qaadaya tayada. Taas macnaheedu waa in video clip abuuray waa sida tayo la mid ah sida asalka ah. Waxaad marag kama aan qaybo diiqid ama Xiso qaybo. Oo lagu daray DVD magaabay yimaado anfacaya marka laga jaro qaybo yar oo ka files video waaweyn. Faa'iido kale oo ay magaabay waa in, waa user saaxiibtinimo oo la jaanqaadaya si loo dhan versions Windows. All inaad samayso waa:
Fur video ah
Riix Mark bilowday
Riix dhammaadka Mark
Riix play soo xulay in ay ku eegaan qayb ka mid ah loo doortay
Simple MP3 magaabay
Magaabay Tani waa awooda badan jarida MP3 files. Marka laga reebo VOB, Waxaa sidoo kale awoodi kara inuu taageero kala duwan oo ka mid ah faylasha sida FLV, MOV, MP4 iyo kuwa kale. Magaabay ayaa lacag la'aan ah aad u saamaxaaya in ay abuuraan ringtones iyo Gurtida, gooyay clips maqal ah oo loogu filimada ama heeso ama laga gooyay audio in ay qaybo yar yar. Waxa kale oo aad xakamayn kartid mugga iyo sidoo kale luqada sababtoo ah waxaa jira 38 fursadaha luuqado kala duwan la heli karo. Isticmaalka MP3 Simple 4dots magaabay waa u fudud yihiin maxaa yeelay waxa kaliya ee aad leedahay si aad u furtid video ah, riix Start iyo button dhamaadka dibna badbaadiyo ama Falanqeynta.
WinX VOB Free in Converter MP4
Magaabay waa mid ka mid ah jaraya ugu fiican in loogu badalo VOB in MP4 ujeedooyin loo maqli karo. Waxa kale oo ay awood u dhaliyay images oo iyaga lagu badbaadinayo sida qaabab file PNG. Waxaa si degdeg ah, virus xor ah oo uu ku leeyahay hanti video Deji tayada suuragelinayo videos tayo sare leh oo maqal ah. WinX VOB Free in MP4 Converter sidoo kale yimaado oo la soo socda muuqaalada tafatirka kartoo.
Video / goobaha Audio si ay u abuuraan image wanaagsan iyo saamaynta dhawaaqa.
Profile- Output go'aansado baaxadda video
Trimming- boholo VOB in MP4 iyada oo qeexaysa bilaabo iyo soo afjaridda mar.
Free Video magaabay Pro
Magaabay wuxuu taageeraa kala duwan oo ay ka mid yihiin files avi, iyo MP4. Waxa kale oo ay taageertaa Processor qaar ka mid ah sida Athlon 64 X 2 iyo Intel (R) Pentium D Dual-Core. Waxaad buuxin kartaa hawl goynta daqiiqado leh in ka badan 300% xawaaraha gudahood. Marka labaad, isticmaalkeeda aan adag iyo xirfadlayaasha iyo bilowga ah labadaba si raaxo leh u isticmaali kartaa. Free Video magaabay Pro v1.0.2 si toos ah u tilmaamaysaa qaabeynta hardware ka dibna waxay khusaysaa qorsheyaasha goynta ku haboon. Waxaad si fudud u baahan tahay inaad guji bilowga iyo dhamaadka badhamada la isticmaalayo jiirka ama jiidi oo hoos u kala dooranayo.
Universal AVI in VOB Converter
Converter kuweeda qaabab file AVI in VOB in ka yar shan ilbiriqsi. Tan waxay ku tusaysaa in ay waxqabadka sare iyo hufnaan howlgalka. Design ayaa sidoo kale yahay mid sahlan iyo qof kasta isticmaali kartaa Universal AVI in v1.0 VOB Converter. All inaad samayso waa faylka kala soo bixi online, oo lacag la'aan ah ka dibna raac tilmaamaha rakibo. Ka dib markii in, doorato faylka si loo roggi iyo heerarka tayada doorbiday ah. Ugu dambayn, riix badhanka diinta oo isticmaal bar horumarka si ay ula socdaan hawlaha qaab beddelidda.
Weeny Free Video magaabay
Tani waa magaabay ah ee in files kala duwan sida mp4, Mpg iyo VOB in qaab kale sida avi iyo mp4. Weeny Free Video magaabay v1 2 aad u saamaxaaya in ay ka gooyay videos laga reebo xayaysiisyada ama isjiidka. Waxa kale oo aad astaysto fursadaha sida ay doorashada. Waad beddeli kartaa si video, bitrate jir ah iyo codec. Waxa kale oo aad xor u tahay magaca ama xataa qabsato xajmiga, mugga iyo sidoo kale tayada.
Free MP3 iovSoft magaabay Joiner
Haddii aad rabto in aad ka gooyay file maqal ah ama ku biiro tiro ka mid ah video files wada, ka dibna la shaqeeyaan v3.06.09 iovSoft MP3 magaabay Joiner lacag la'aan ah. Its qaabeynta ka kooban yahay mas'uul MP3 magaabay iyo joiner lacag la'aan ah. Waxaad heli kartaa mahad muhiimka ah in MP3 magaabay oo ay ku biiraan u wada ducaysay. Free MP3 iovSoft magaabay Joiner v3.06.09 ku baaraya hawlaha aad u dooratid baadi lacag la'aan ah goobaha ay u bilaabaa oo la xidhaa shaqada. Waxa dhaba taageertaa encoder kuwa curyaan ah, coder OGG, MP3 VBR iyo OGG VBR aad.
Waxaad si fudud u jari kari aad mahad files music MP3 in My Mp3 Spliter v1.0. Waxaa hubaal ah user saaxiibtinimo oo aad ku raaxaysan karaan tayo sare leh clips audio. Marka la isticmaalayo barnaamijka, si fudud u dejisan aad file MP3 iyo abuuro ringtone ugu fiican.
Magaabay ayaa jari karaa boqolaal haddii aan kumanaan mp3 files ee go a. Waa super-degdeg ah oo ay diinta ma abuuro files ku meel gaar ah. Waxaa sidoo kale kartoo inay meel processor multi-muhiimka ah iyo SSE oo awood u jiitaa iyo dhibic. More si, ay tahay in ay la jaan qaada Windows Vista iyo Windows 7 Its user interface sidoo kale waxay la mid tahay in sahamisa Windows halkan ka fududahay in la isticmaalo. Encoder curyaan ka dhigaysa geedi socodka ay si dhakhso ah. Isticmaalka qaababka sida, aad nuqul karo iyo badbaadin Cajalado ka file isha iyo qori ID3v1, daanyeer MP3 iyo ID3v2 tag.MP3 magaabay v10.1.1 sidoo kale jari karaa file MP3 inay:
Qaybo dhererka la doonayo
Oo dhererkeedu wuxuu clips Equal
Clips size gaarka ah
User sooca ah (Start iyo dhibic dhammaadka)
Chick Video magaabay
The v2.350 Chick Video magaabay free fursad kuu siinayaan in labada jaray ama jeex jeexi aad videos doonaa. Waxaa sidoo kale loo yaqaan splitter Video ah, Video clipper ama Video magaabay. Laga soo bilaabo magacyada kuwaas, kuu sheegi karaa in aad clips badan ka hal file video ah ka heli kartaa. Waxa kale oo aad iyaga ku biiri kartaa si aad u hesho size la doonayo iyo dhererka. Utility wuxuu taageeraa dhowr ah oo ay ka mid yihiin files AVI, MP4, DIVX iyo qaar badan. V2.350 Chick Video magaabay ayaa kala duwan oo waafaqsan sare, sababtoo ah waxaa loo isticmaali karaa oo dhan software Windows. Its xawaaraha waa mid cajiib ah oo sidaas waa dayactirka tayada ay.
Sida loo Beddelaan VOB in DVD ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Top 15 Apps inay dar Music Videos in
> Resource > Video > Sida loo jar VOB faylasha iyo Top jaraya 10 VOB